कोरोना भाइरसबारे वैज्ञानिकले खुलाए यस्तो रहस्य ! – Online Nepal
कोरोना भाइरसबारे वैज्ञानिकले खुलाए यस्तो रहस्य !
May 7, 2020 520
काठमाडौं । अहिले विश्वभर महामारीका रुपमा देखिएको कोरोनाका कारण विश्व लगभग बन्द छ । सबै देशहरुले यसको संक्रमण रोक्न लकडाउन लगाइएको छ । अहिलेको ताजा जानकारी अनुसार विश्वभर ३८ लाख २१ हजार भन्दा धेरै संक्रमित हुँदा २ लाख ६५ हजार भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ । जानकारी अनुसार १३ लाख भन्दा धेरै निको पनि भैसकेका छन् ।
यो बीचमा अहिले एक सुखद खबर आएको छ । कोरोनाभाइरसबाट पीडित विश्वका लागि एक आशाको किरण भाइरस आफैले लिएर आएको छ । दैनिक भास्करका अनुसार अमेरिकाको एरिजोनामा वैज्ञानिकले कोरोनाको सार्स–कोभ–२ भाइरसमा एउटा यस्तो अनौठो म्युटेशन (बदलाव) र जेनेटिक प्याट्रन पत्ता लगाएका छन् । तपाँईको जानकारीका लागि बताउ कि १७ वर्ष पहिलो सार्स भाइरसको संक्रमणको समयमा यस्तै म्युटेशन देखा परेको थियो ।
यो परिवर्तन भाइरस प्रोटिनको ठूलो हिस्सा अर्थात् यसको जेनेटिक मेटरियल आफै गायब हुनु हो । वैज्ञानिक यसकारण उत्साहित छन् किनकी यस्तो परिवर्तन देखिएका ५ महिनाभित्रै सार्सको संक्रमण सकिएको थियो । त्यसैले कोरोनाको यो संकेत उसको कमजोरीको कारण बन्नसक्ने भन्दै वैज्ञानिकहरु उत्साहित छन् ।
Prevपारसको १२ लाख सोनिकाले चोरेको खबरले बबाल, पारसले कसलाई दिए डिभोर्स ! [भिडियोसहित]
Nextनेपाल सुरक्षित भन्दै अमेरिका, युरोपका प्राइभेट जेटवाला धनाढ्यहरू नेपाल आउन खोजिरहेका छन्
नेपालमा एकैचोटी3जनामा कोरोना भेटियो ! पहिलो पटक नेपालभित्रै कोरोना सरेको पुष्टि (भिडियो हेर्नुस)